I-UIP4000hdT - 4kW High Performance Ultrasonics - Hielscher Ultrasound Technology
I-UIP4000hdT inikeza amandla angama-4kW amandla we-ultrasound futhi iyimishini yokukhiqiza enokwethenjelwa ngisho nangaphansi kwezimo ezifunayo. Yenzelwe izinqubo zezimboni ngezinga eliphakeme lemandla kanye nemigomo emikhulu. I-UIP4000hdT iyi-processor enamandla futhi enamandla ye-ultrasonic.
Izinhlelo ezijwayelekile ze-UIP4000hdT zifaka i-homogenization, emulsification, Ukuhlakazeka & i-particle kahle, Ukukhipha, ukushaywa kwamafutha omnqumo, ukuqedwa noma Ukusabela kwe-Sonochemical njenge Sono-Synthesis futhi Sono-Catalysis.
Lolu hlelo lokusebenza olunamandla kakhulu luyathandeka kakhulu, ngoba akukho mithombo yezokupholisa, njengamanzi noma umoya ocindezelweyo, okudingekayo. Ukuklama okhethekile kwalesi simiso kuvumela ukusetshenziswa kwayo ngaphansi kwezimo zokusebenza ezimbi, njengothuli, ukungcola, izinga lokushisa nomswakama. Iprosesa ye ultrasonic iqukethe titanium nensimbi engagqwali. I-flange engena-oscillation iboniswe ukuthi iyasiza kakhulu ekuhlanganisweni kwemishini nezitshalo. Kuye kwashintshaniswa nezimo ezintsha zobuchwepheshe ngokuhambisana nokuziphatha okukhiphayo.
Umqondo we-modular we-UIP4000hdT uhlinzeka ngesistimu enamandla futhi okwamanje kakhulu yokulondoloza isikhala. I-transducer kanye ne-generator bahlala ndawonye ngokwehlukana komunye nomunye futhi baxhunywe ngezingcingo. Umklamo owenziwe ngokwawo unciphisa umsebenzi odingekayo wokufakwa, ukusebenza nokugcinwa ezingeni eliphansi. Amamojula amaningi we-UIP4000hdT angahlanganiswa kalula ukuze akhe amaqoqo ngekhono eliphezulu lezinqubo.
4kW Ukusebenzisa Amandla
1 kuya 3m³ / hr
0.4 kuya 2m³ / hr
0.1 kuya 0.8m³ / hr
0.02 kuya 0.4m³ / hr
0.01 kuya 0.02m³ / hr
Ngokuvamile, i-flow cell kanye ne-transducer ye-ultrasonic zitholakala kwikhabhinethi yensimbi engenalutho enezinhlangothi ezimbili eza ne-sound effect sounding. Uma kudingekile, i-UIP4000hdT ingasetshenziselwa ukunikezwa kokwephuza kweziphuzo ezikwenzeni ezithile. Yiqiniso, i-UIP4000hdT iyakwazi ukusebenza ngokuqhubekayo ekuphumeni kwamandla okugcwele (24hrs / 7days) njengezinhlelo zonke ze-ultrasonic ezivela ku-Hielscher Ultrasonics.
I-Hielscher sika-UIP4000hdT – 4kW high performance ultrasonics for izinqubo in flow-ngokusebenzisa mode
4000 watts ultrasonicator enamandla
I-UIP4000hdT ingalawulwa ngokusebenzisa noma yisiphi isiphequluli esivamile, njenge-Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla, i-mobile IE / Safari usebenzisa i-interface entsha ye-LAN web. Ukuxhumeka kwe-LAN kuyilungiselelo elilula kakhulu le-plug-n-play futhi akudingi ukufakwa kwesofthiwe. Idivayisi ye-ultrasonic isebenza njengeseva ye-DHCP / iklayenti kanye nezicelo noma ibeka i-IP ngokuzenzekelayo. Idivayisi ingaqhutshwa ngokuqondile kwi-PC / MAC noma isebenzise inkinobho noma router. Ukusebenzisa i-router engenayo i-wireless eyakhelwe ngaphambilini, idivayisi ingalawulwa kusuka kuma-smartphones amaningi noma kumakhompyutha we-tablet, isib. I-Apple iPad. Ukusebenzisa ukuthunyelwa kwe-port ye-router exhunywe, ungalawula i-UIP4000hdT yakho nge-intanethi kusuka kunoma iyiphi indawo emhlabeni – i-smart-phone yakho noma i-tablet ibe yisilawuli kude.
Esinye isici esihlakaniphile se-UIP4000hdT yindlela yokusebenza nokulawula nge-LAN (inethiwekhi yendawo yendawo) eyenza ukuthi ukusebenza kusebenze futhi kuvumela ukucubungula okuguquguqukayo okukhulu. Yonke imininingwane yenqubo ye-sonication ibhalwe ekhadini le-SD / le-USB, ngokuzenzakalelayo. Inzwa ekhuphukayo ibeka izinga lokushisa unomphela kodwa i-sensor ye-pressure sensor iyatholakala.
Njengawo wonke amadivayisi we-Hielscher ultrasonic, i-UIP4000hdT iza ne-intelligent automation frequency tuning. Uma idivayisi ishintshiwe, i-generator izobona imvamisa yokusebenza efanele. Kuzobe sekuhambisa idivayisi kule mvamisa. Lokho kuthuthukisa ukusebenza kahle kwamandla kagesi nokwethenjwa kwamadivayisi wethu we-ultrasonic. Konke okudingeka ukwenze, ukushintsha uhlelo. I-generator izokwenza ukulungiswa kwezivama ngokuzenzekelayo ngephiciti yesibili.
I-High Performance Ultrasonic Unit
Awuqinisekile ukuthi iyiphi uhlelo lwe-ultrasonic olufanele kakhulu inqubo yakho?
Izinsisekelo ze-Ultrasonic Homogenization
I-homogenizers ye-Ultrasonic isetshenziselwa ukusabalalisa, i-emulsification, i-wet-milling, i-nano- & ukukhishwa kwemithi, ukukhipha (kusuka ezitshalweni namathisini eseli), ukuhlanganisa kanye nokwenyuka kwamakhemikhali (okuthiwa yi-sono-chemistry) kanye ne-degassing. I-homogenization ye-ultrasonic ivame ukusetshenziswa njengegama lesambulela elihlanganisa zonke lezi zicelo ezishiwo ngaphambili. I-homogenization esisizwa nge-ultrasound isekelwe esimisweni sokusebenza sokuchoshulwa kwe-acoustic, eyenzeka lapho amaza aphezulu e-ultrasound ehlanganiswa abe yi-medium medium. Ngaphansi kwamagagasi amakhulu e-ultrasound, ama-bubbles vacuum vacuum akhiqizwa phakathi, okukhula ngaphezu komshini ophezulu wokucindezela / ukucindezela okuphansi kwamagagasi e-ultrasound. Ngesinye isikhathi, lapho ama-bubbles amancane afinyelele esimweni esinamandla, lapho angenakukwazi ukuthola khona amandla amaningi, awela phansi ngesihluku. Lesi simo se-vacuum bubble implosion ibizwa ngokuthi i-cavitation. I-implosion yama-bubbles ahlanzekile idala amagagasi ashaqisayo, ama-jets okusakaza / ama-jets, i-shear ephezulu, ukushisa okuphezulu nokucindezela okuhlukile okunezinto ezanele zokuphula izibopho ezinama-covalent, ukushintsha ama-molecule nokushintsha ukuphendula kwamakhemikhali.
Ukuze uthole imiphumela engcono kakhulu kwinkqubo yokwenza i-homogenization, iprosesa ye-ultrasonic nokusetha kwayo ingalungiswa ngokushintsha iziguquguquko ezilandelayo:
Ukulinganisa (ukususwa kwe-sonotrode) nokuqina
Isitsha se-Sonication (i-batch noma flow flow cell: usayizi, i-geometry, izinga lokugeleza)
Amaprosesa asezingeni eliphezulu asebenza ngama-Hielscher asebenzisa ama-generator we-piezoelectric ezenziwe ngama-crystals e-zirconate e-titanate. Ukudlidliza kuhanjiswa phansi kwe-titanium phondo lokuhlelwa kwe-titanium ngo-19-26 kHz. Ukusuka uphondo i vibration ultrasonic ihlangene nge sonotrode ultrasonic (tip, probe) zibe medium fluid. I-Hielscher inikeza amaprosesa e-ultrasonic ngamanani okulinganisa kusuka ku-50 kuya ku-16,000 watts ngayinye ngayinye ye-ultrasonic futhi ihlanganisa izinto ezidingekayo kusuka kumabhanki amancane labasebenzi namabhentshi-phezulu kuze kuqhume umshayeli wezitshalo kanye nezinyunithi ezigcwele zezohwebo ze-ultrasonic ze-volume high byput.
I-Process Control eyinkimbinkimbi Yokuthola imiphumela eyi-Sonication efanele
Izimo ze-Sonication zibalulekile ekukhipheni, imiphumela yezinqubo kanye nokukhiqizwa kwezinqubo ze-ultrasonic. Ngaphandle kokulawulwa okuqondile kwe-ultrasonic amandla okukhipha, okulungiswe yi-amplitude kanye nokuqina, izinga lokushisa, ukucindezela kanye nesikhathi sokunikwa ingane yizici ezibalulekile. Amaphrosesa ase-Hielscher digital ultrasonic afika ne-thermo-couple couple plugable. Inzwa yocindezelayo eguquguqukayo iyatholakala ngokuzithandela. Zombili izinzwa zixhunywe ne-generator ye-ultrasonic, enamakhadi we-SD yangaphakathi. Isofthiwe ye-ultrasonic idivayisi ibhala yonke idatha yenqubo (usuku, isikhathi, amplitude, energy ultrasonic, energy net, izinga lokushisa, ingcindezi) kufayela CSV ekhadini le-SD. Lokhu kwenza i-sonication yakho isebenze ngokufana nokuphindaphindiwe.
Ku-amplitudes ephezulu, amandla aphezulu okukhiphayo ayadingeka. Ngaphansi komthwalo okhudlwana njenge-viscosity ephezulu yesisindo esiphakathi noma esiphezulu, kudingekile amandla engeziwe e-ultrasound ukushayela i-sonotrode endaweni yamapulitude ayifunayo. Ikhudlwana ngaphambili komsindo we-sonotrode (iphoyinti), amandla amaningi adingekayo ukuze avumele ukuthi abuyele. Nge sonotrode enkulu, imiqulu emikhulu ingacutshungulwa. I-sonotrodes yezimboni ze-Hielscher kanye cascatrodes ingaletha ama-amplitudes aphakeme kakhulu. Amplitudes angafika ku-200μm angaqhutshwa kalula ngokuqhubekayo ku-24/7 ukusebenza. Nge-amplitudes ephakeme nakakhulu, i-sonotrode e-ultrasonic eyenziwe ngezifiso iyatholakala. Ukuqina kwama-ultrasonicators kaHielscher kuvumela ukusebenza kwe-24/7 ngaphansi komthwalo osindayo kanye nezimo ezidinga.
Ngokuba izinqubo eziningi ultrasonic, izinga lokushisa medium sonicated kufanele kube esincane ngangokunokwenzeka for amazinga okushisa aphansi kukhuthaza isizukulwane cavitation okukhulu. I-Hielscher inikeza amangqamuzana egeleza we-ultrasonic nama-reactors nge-cooling jackets, asekela ukugcinwa kwenqubo ephakeme yokushisa. Amaseli egeleza futhi aphinde aphinde aphinde avuseleleke, nawo. Ngaphansi kokucindezelwa okuphakeme, i-cavitation eyengeziwe iyenzeka. Ngakho-ke, i-Hielscher inikeza ama-reactors angakwazi ukucindezela kalula kufika ku-300atm.
I-Hielscher Ultrasonics ikhiqiza ama-probe e-ultrasonic ofayizi nobukhulu obuhlukene (isb cascatrodes), okuyinto evumela ukukala yonke inqubo ultrasonic imiphumela ngokuphelele linear. With 16kW homogenizers ultrasonic kanye eziningi izinhlobo ze sonotrodes kanye nokugeleza cell reactors, Hielscher kuyinto umlingani wakho wesikhathi eside ehlangabezana nakho for izinqubo ultrasonic on izimboni zezimboni. Ngaphandle kwezinhlobonhlobo ze-ultrasonicators esezingeni elijwayelekile, ama-Hielscher adizayinisa futhi akhiqiza nezinhlelo ezikhethiwe, futhi.